Football Khabar » ग्रीजम्यान ‘नम्बर १ खराब पेनाल्टी टेकर’ : यस्तो छ तथ्यांक
ग्रीजम्यान ‘नम्बर १ खराब पेनाल्टी टेकर’ : यस्तो छ तथ्यांक
स्पेनिस क्लब बार्सिलोना तथा फ्रान्सका स्टार फरवार्ड एन्टोनी ग्रीजम्यान यतिबेला खराब प्रदर्शनका कारण दबाब र तनावमा छन् । क्लबको टोलीमा विश्वकपविजेता ग्रीजम्यान उच्च प्रदर्शन गर्नका लागि भन्दा पनि टोलीमा स्थान बनाउनकै लागि संघर्ष गरिरहेका छन् । उनलाई बार्सिलोनामा सुरुआती टोलीमा स्थान बनाउनै कठिन परिरहेको छ ।
यता, राष्ट्रिय टोलीमा त ग्रीजम्यान झनै चर्को आलोचना खेपिरहेका छन् । राष्ट्रिय टोलीमा लगातार पेनाल्टी मिस गर्दा ग्रीजम्यान आफैं दबाबमा छन् । पछिल्लो समय बार्सिलोनाले ला लिगामा रियल बेटिसविरुद्ध खेल्दा ग्रीजम्यान १ पेनाल्टी गुमाएका थिए । पहिलो हाफमा पेनाल्टी गुमाए पनि उनले दोस्रो हाफमा १ गोल गरेका थिए ।
तर, समग्रमा ग्रीजम्यान अहिले आलोचनामुक्त छैनन् । अरू कुरा छाडेर पेनाल्टीको मात्रै कुरा गर्दा पनि ग्रीजम्यान यतिबेला युरोपियन टप–५ लिगमा खराब नम्बर १ खराब पेनाल्टी टेकर खेलाडीमा पर्छन् । टप–५ लिग खेल्ने खेलाडीमध्ये लगातार चार पेनाल्टी मिस गर्ने खराब रेकर्ड ग्रीजम्यानकै नाममा छ । सो अवधिमा हानेका सबै १०० प्रतिशत पेनाल्टी मिस गर्ने ग्रीजम्यानबाहेक अरू खेलाडी छैनन् ।
ग्रीजम्यानले पछिल्लोपटक हानेका चार पेनाल्टी लगातार चुकाएका छन् । जसमा उनले फ्रान्सको टोलीमा लगातार तीन पेनाल्टी मिस गरेका छन् भने बार्सिलोनामा हानेको पछिल्लो पेनाल्टी पनि उनले मिस गरेका थिए ।
ग्रीजम्यानले पेनाल्टी मिस गरेका पछिल्ला चार खेल:
१. सेप्टेम्बर ८, २०१९– अल्बानियाविरुद्ध – युरो कप छनौट
२. सेप्टम्बर ११, २०१९ – आन्डोराविरुद्ध – युरो कप छनौट
३. सेप्टेम्बर ६, २०२० – स्वीडेनविरुद्ध – युइएफए नेसन्स लिग
४. नोभेम्बर ७, २०२० – रियल बेटिसविरुद्ध – ला लिगा
फ्रान्सले आज बुधबार राति अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा फिनल्यान्डको सामना गर्दैछ । आफ्नो घरेलु मैदानमा फिनल्यान्डको सामना गर्दा ग्रीजम्यान पनि टोलीमा हुनेछन् । ग्रीजम्यानलाई फ्रान्सले यस चरणमा तीन अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दा पेनाल्टीको लगातार खराब यात्रालाई पूर्णविराम लगाउने अवसर छ ।
प्रकाशित मिति २६ कार्तिक २०७७, बुधबार २१:५९